खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा अपरेशन सेवा शुरु
शनिवार, मंसिर २०, २०७७ ०१:५२:२२ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
खजुरा । बाँकेको खजुरामा रहेकोे सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा अपरेशन सेवा आरम्भ गरिएको छ ।
संघीय सांसद् नन्दलाल रोकायले सेवा संचालनको व्यानर पढेर उद्घाटन गर्दै तत्कालीन सबै पार्टीका नेतृत्वको इच्छाशक्ति र जनताको सहयोगमा क्यान्सर अस्पताल निर्माण भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय जागेको खण्डमा धेरै कुराको विकास गर्न सम्भावना भएको उल्लेख्य गर्दै गर्न खोज्दा नै सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाँके जिल्लाका प्रमुख समस्या र विकासको लागि सबै सांसद् र स्थानीय तहका प्रमुख एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक संस्कार बोकेर जानुपर्ने भन्दै व्यक्ति हित नभई सार्वजनिक हितमा काम गर्नुपर्नेमा सांसद् रोकायले जोड दिनुभयो । देशमा त्यागी नेताको आवश्यक रहेको औंल्याउदै उहाँले अब सोच बदल्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद् रोकायले प्रजातान्त्रिक मर्म बुझ्न र धैर्यता गर्न आग्रह गर्नुभयो । "उत्पादनसंग जोड्ने हो भने साधन स्रोतमा कमी छैन । जनताको भविष्य जोडिएको क्यान्सर अस्पतालमा संघले सहयोग जारी राख्नेछ," उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेश सांसद् बाबुराम गौतमले सेवामूलक संस्थामा राजनीतिकारण हुन नहुने बताउंँदै परोपकार गर्नु धर्म भएको बताउनुभयो । परोपकार त्याग र तपस्याको महत्त्व बुझ्न जरुरी रहेकोे उल्लेख्य गर्नुभयो । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियोे ।
खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालल नेपालकै इतिहासमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट बनेको खजुरा गाउँपालिका प्रमुख तथा प्रखर परोपकार मिसनका अध्यक्ष किष्मत कुमार कक्षपतिले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारको आफ्नो स्वायत्त गठन आदेशमा संघीय सरकार मार्फत् संचालनमा आएको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा अप्रेशन सेवा शुरु भएको अध्यक्ष कक्षपतिले जानकारी गराउनुभयो ।
मंसिर ५ गते सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको कार्य प्रारम्भ भएको पछिल्लो दुई महिना पुग्दै गर्दा यस अस्पतालको प्रमुख भागका रुपमा रहेको अप्रेशन सेवा सञ्चालनमा आएको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले हिस्टो प्याथोलोजी, स्त्री रोग, नाक कान घाँटीको विशेषज्ञ ल्याई दैनिक सेवा बिस्तारको योजनामा रहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय श्रीवास्त्व, बासगढी नगरपालिका मेयर शालिकराम अधिकारी, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बिकास समिति सदस्य चरित्रा शाह, भेरी अस्पतालका मेसु डाक्टर प्रकाश थापाले शुभकामना राख्दा अस्पतालका निर्देशक डा. आचार्यले हाल प्रदान गर्दै आएको सेवा बारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, मंसिर ५, २०७७, ०६:४६:००